I-china i-Aluminium-hand woven Bistro Set (AV-T103) abakhiqizi nabathengisi Aviva
ISIHLALO SE-ALUMINUM ROPE
ISIKHUNGO SEBHODI LESITOLO
I-HPL TABLE TOP
Ibhlokhi B, Flat Lonke, 22 Haikou Road, Zhangcha Town, Chancheng Zone, Foshan, Guangdong, China
UMsombuluko - Ilanga: 9: 00–18: 00
Isethi ye-Bistro ephothiwe nge-Aluminium (AV-T103)
1.Hand ukweluka intambo design
2.Lightweight futhi eqinile aluminium ingxubevange uhlaka
Umkhuba wokusebenzisa intambo ephothiwe ukwakha ifenisha yisiko elibuyela ezikhathini zasendulo eGibhithe. Ngalezo zinsuku zokuqala, abaseGibhithe bakudala babesebenzisa izintambo ezilukiwe ukwenza izihlalo zezintambo zolayini. Lezi zinto azithandeki ezinkulungwaneni zeminyaka kuze kube sekuvuseleleni kwazo kwakamuva njengezinto eziyinhloko ezinhlobonhlobo zefenisha. Abantu bayayithanda ifenisha yezintambo eyelukiwe ngamandla ayo kanye nokuguquguquka okuvumela izinhlobo eziningi zezitayela nemisebenzi yefenisha.
Abakhi befenisha bathanda intambo ngoba ibavumela ithuba lobuciko obukhulu ngokusebenzisa uhlobo olulodwa kuphela lwento. Ngaphezu kokuhlobisa, abaklami bangakhetha enye yezindlela eziningi zokubopha intambo ndawonye njengokuluka, ukuluka, ukuluka noma ukuluka. Kulula futhi ukufaka intambo nezinye izinto ngokubukeka okuhle kakhulu.
Lesi sihlalo sokuphumula ngasinye kanye nezihlalo ze-bistro senziwe ngentambo ephothiwe, equkethe uhlaka lwe-aluminium alloy oluhlanganiswe nentambo yesimo sezulu yonke ukudala iqoqo elinethezekile ngokungajwayelekile elingahlalisa kalula amabhalkhoni nezikhala ezincane, ikakhulukazi ezifanele ama-bistros, imigoqo yangaphandle, emphemeni, echibini nasemuva kwegceke.
Itafula lekhofi lenziwe nge-alloy aluminium alloy ephuziziweyo engasindi kakhulu futhi eqinile kakhulu, okulula ukuyihlanza nokuyihambisa, ilungele noma yiziphi izingxoxo. Ilungele ukuhlobisa ikhaya, isitolo sekhofi, i-bistro, ingadi, igceke elingemuva, uvulandi kanye ne-cafe.
Ukusetha kufaka phakathi:
1 x Ithebula (I-Cast Iron Table Base ne-HPL Top Top)
I-2 x Isihlalo Sezintambo Esenziwe Ngesandla (i-Olefin Enosayizi Oyisisekelo we-Dia. 6mm ne-Plastic Wood Armrest)
Ithebula: Dia.70 * 73CM
Ikhofi Ithebula: DIA.45 * 56CM
Isihlalo: 53 * 58 * 80CM
Ukupakisha: I-Stackable neCarton
Ulwazi Olungeziwe: Umbala, usayizi, izingcezu zesigaba zingenziwa ngezifiso, i-OEM yamukelwa njalo.
Xhumana nathi uma unemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu.
Langaphambilini I-Aluminium yesandla eselukiwe (AV-T78)
Olandelayo: CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-320
Isethi ye-Bistro ephothiwe nge-Aluminium (AV-T18)
I-Aluminium yesandla eselukiwe (AV-T16)
Isethi ye-Bistro ephothiwe nge-Aluminium (AV-T16)
I-Aluminium yesandla eselukiwe (AV-T01)
I-Aluminium-hand woven Table Set (AV-T72)
I-Aluminium yesandla eselukiwe (AV-T18)